Taona A – Trinitera Malagasy
Étiquette : Taona A
Voaantso ho amin’ny fanantenana isika Jenezy 12, 1-4a/ Salamo 32 2 Tim 1, 8-10 Matio 17, 1-9 Eo am-piomanana amin’ny Paka dia aroson’ny Litorjia hodinihintsika amin’ity alahady II ity ny Fiovan’ny Tompo Tarehy (Mt 17, 1-9) izay santatr’ilay voninahitry ny Paka,…
Andriamanitra tsy tia ratsy fa ny olombelona no be siasia Jenezy 2, 7-9; 3, 1-7/ Salamo 50 Romana 5, 12-19 Matio 4, 1-11 Karemy : avy amin’ny teny frantsay hoe carême, izay avy amin’ny teny latinina hoe XL (quadragesima), midika hoe…
Tano ao am-po ny didin-janahary, fa fototry ny soa. Siraka 15, 15-20 Salamo 118 1 Korinto 2, 6-10 Matio 5, 17-37 Lalan’ny Fahendrena ny Lalàn’YHWH, ny Torah (Bar 3, 27; 4, 1). Lalana atorony ny tsirairay mba hahatongavana any amin’ny…
Ny soa atao levenam-bola Izaia 58, 7-10/ Salamo 111/ 1 Kor 2, 1-5/ Md Matio 5, 13-16 Ho an’izay te ho mpianatr’i Kristy dia antsoiny hanaraka ny lalana lavorary mitondra amin’ny Fahasambarana. Izay moa no lohahevitry ny Evanjely tamin’ny alahady…